Ezi zii-smartphones eziya kuhlaziywa kwi-Android 7.0 Nougat | Iindaba zeGajethi
Ezi zii-smartphones eziya kuhlaziywa kwi-Android 7.0 Nougat
IiVillamandos | | Android, Iiselfowuni, Izaziso
Kwiveki ephelileyo uGoogle utyhile igama lenguqulelo entsha ye-Android, ebikade ithengisa kwimarike iiveki ezimbalwa njengohlobo lovavanyo. Emva kokuqikelela okuninzi igama elisemthethweni le- I-Android 7.0, kude kube ngoku yaziwa ngokuba yi-Android N, iya kuba yi-Android Nougat, kungekudala uza kuba nohlobo lokugqibela olunethemba lokuba inani elikhulu labasebenzisi.
Ubhaptizo olusemthethweni lwenguqulelo nganye ye-Android sisixhobo sokuqala kubo bonke abavelisi ukuba baqale ukusebenza ngokuhlaziya izixhobo zabo eziphathwayo. Okwangoku akukho namnye ubenobuganga bokunika umhla othile, kodwa kukho abavelisi abaliqela abasele bezibophelele ekwenzeni uhlaziyo kwangoko kunangoku. Ixesha lokulinda lokufika kwenkqubo entsha yokusebenza kwizixhobo zabenzi abahlukeneyo ziya kwahluka kakhulu. Abanye babo sele beyiqinisekisile imephu yabo yendlela ngokusesikweni kwaye okomzuzwana abanye bathule ngokungaqhelekanga.
Okwangoku namhlanje siza kukubonisa ifayile ye- Uluhlu lwabavelisi ababhengeze uhlaziyo kwi-Android Nougat 7.0, kunye nee-smartphones eziza kufumana isoftware entsha. Zintathu kuphela iinkampani eziqinisekisile ngokusesikweni izicwangciso zazo, ezinye zithe cwaka, nangona sinethemba lokuba njengoko iintsuku zihamba, abenzi ababalulekileyo kwimakethi yeefowuni eziphathwayo baya kuthetha kwaye baveze izicwangciso zabo.
2 Imoto yeLenovo
10 Abanye abavelisi
Kungenzeka njani ukuba kungenjalo Izixhobo eziphathwayo zikaGoogle ziya kuba zezokuqala ukufumana uhlaziyo lwe-Android 7.0 Nougat, Njengazo zonke iinguqulelo ezintsha ze-Android. Ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo ukuba unesixhobo esivela kwisigebenga sokukhangela, kungekudala uza kuba nakho ukonwabela uhlobo olutsha lwe-Android.
Ukongeza, ukuba unesibindi okanye ngaphezulu uthe ulwazi oluyimfuneko, ngoku unokufaka inguqulelo ye-beta ye-Android Nougat onokuthi uvavanye ngayo iindaba zolu hlobo lutsha, kunye nemisebenzi emitsha kunye nokukhetha okubandakanya.
Apha sikubonisa ifayile ye- ii-smartphones ezinesitywina sikaGoogle ngokuqinisekileyo esiya kufumana i-Android 7.0 Nougat ngokusesikweni;
Kolu luhlu ngokuqinisekileyo uninzi lwenu luyaphoswa Nexus 5, ngokokutsho kwamarhe amva nje kunokuba kunokwenzeka ukuba ungalufumani olu hlaziyo, ngokungathandabuzekiyo oluya kuba ziindaba ezimbi kakhulu kubasebenzisi abaninzi abasenaso esi sixhobo.
Ngomhla wakhe Motorola, ngoku eyeLenovo, yekaGoogle, ekubonakala ngathi ibisoloko iyinika ilungelo elingaqhelekanga lokukwazi ukufumana ngokukhawuleza iinguqulelo ezintsha zenkqubo yokusebenza ye-Android eqalwa kwimarike yokukhangela.
Uxwebhu lwangaphakathi lwenkampani luveze uluhlu lwezixhobo eziza kuhlaziywa kwi-Android 7.0 Nougat, nangona ewe, ngalo mzuzu njengoko kusenzeka kunye nabanye abavelisi asinawo umhla, nkqu nokubonisa. Ewe, ngalo mzuzu olu lwazi luvunyiweyo aluqinisekiswanga ngokusemthethweni yi-Motorola.
* uqhwaba izandla kancinci *?
Uxwebhu lwangaphakathi lubonisa ukuba yeyiphi isixhobo seMoto esiza kufumana "i-Android Nougat" pic.twitter.com/3zSLi0rVRn
-Nalin K. (@ CrazyNalin) Julayi 4, 2016
Le yile Uluhlu lwee-smartphones eziya kuhlaziywa ngokukhuselekileyo kwi-Android 7.0, nesinye isixhobo esinokongezwa kuso;
Moto X uHlelo oluSulungekileyo
Uhlobo lweShushu X
Moto X Dlala
Moto G (Isizukulwana sesi-3)
Umlilo X Force
UKUQHUBA Turbo 2
UKUQHUBA iTurbo Maxx 2
Uhlobo lweMoto G Turbo
Moto G Turbo (uHlelo lweVirat Kohli)
nokuVavanyelwa Ihlala ingomnye wabavelisi bokuqala ukuqinisekisa uluhlu lwezixhobo eziphathwayo eziya kuhlaziywa kuhlobo olutsha lwe-Android oluqinisekiswe ngokusemthethweni. Ngesi sihlandlo, abantu baseTaiwan abakhange benze ngendlela eyahlukileyo kwaye sele sinoluhlu olusemthethweni lwee-smartphones eziza kuhlaziywa kwi-Nougat epapashwe kwiinethiwekhi ezahlukeneyo zenkampani.
Ewe, olu luhlu esikubonisa lona apha ngezantsi kukucinga ukuba luya kukhula, kuba okwangoku lenziwe ziitheminali ezi-3, ngokucacileyo zimbalwa kakhulu kwinkampani efana ne-HTC.
Iswiti kakhulu. I-Android Nougat -uhlobo olulandelayo lweGoogle kaGoogle-izakuza kwi-HTC 10, HTC One A9 kunye ne-HTC One M9. pic.twitter.com/cB5S2zv0PW
-I-HTC (@htc) Juni 30, 2016
Apha sigqibezela uphononongo lwabavelisi abathe ngokusesikweni, okanye ngokuvuza, sele beqinisekisile izixhobo eziza kuqala ukuhlaziywa kwi-Android 7.0 Nougat entsha kwaye siqala nabanye abavelisi abangaqinisekisanga nto ngalo mzuzu.
Samsung kunye nohlaziyo kwiinguqulelo ezintsha ze-Android bezikhawuleze kakhulu, ke kulindelwe ukuba i-Android Nougat entsha izakuthatha ithutyana ukufikelela kwizixhobo ezahlukeneyo zenkampani yaseMzantsi Korea.
Ngokwamahemuhemu inguqulelo entsha ye-Android iya kufikelela kwiflegi yangoku yenkampani kwaye Ndingashiya iGalaxy S5 kunye neGalaxy Note 3. Ukusuka kwezi terminions ukuya phambili kwaye ukuba nje bakwindawo ekuthiwa yeyophakathi okanye ephezulu, kufuneka bahlaziywe kwi-Android 7.0 entsha
Ukuba unayo i-smartphone ye-Samsung okwangoku, kuya kufuneka ulinde uluhlu lwezixhobo ukuba ziqinisekiswe kwaye ube nakho ukwazi ukuba ngaba unayo ngoku ibandakanyiwe kuyo.
Omnye wabavelisi obhengeze izicwangciso zabo zokuphucula ukuya kwi-Android 7.0 Nougat kumaxesha akutshanje ibiyiyo OnePlus, ethe ngaphandle kweetheminali ezimbalwa kwintengiso, yenza umzamo omkhulu wokuzenza zibaluleke kwaye ngaphezulu kwako konke ukuzigcina zihlaziywa.
Apha sikubonisa ifayile ye- izixhobo eziphathwayo ezinesitywina se-OnePlus ukuze zihlaziywe, ngokukhawuleza;
Ixesha elithile ngoku LG Ngomnye wabavelisi abakhokelayo ngokubhekisele kuhlaziyo lwe-Android kwaye ngaphandle kokuqhubeka, i-LG G4 yayiyi-smartphone yokuqala yokuhlaziya kwi-Android Marshmallow (i-Nexus ecaleni). Phantse ngokuqinisekileyo, kwaye nangona okwangoku Asinalo naluphi na ulwazi olusemthethweniIzixhobo zefowuni ze-LG ziya kuba phakathi kwabokuqala ukufumana i-Android 7.0 Nougat entsha.
Kolu luhlu kufuneka sifumane i-LG G5, i-LG G4 kunye ne-LG V10 ngokhuseleko olupheleleyo. Ukuba izinto zihamba njengoko kufanelekile, kunokwenzeka ukuba olu luhlu lubanzi kakhulu, nangona ukufumanisa ukuba kuya kufuneka silinde i-LG ukuqinisekisa ngokusemthethweni ii-smartphones eziza kuzihlaziya.
Okomzuzwana Abakwa-LG sele beqinisekisile ukuba baya kufumana i-Android 7.0 Nougat kwi-LG G5, kunye ne-LG V20 esandula ukubekwa esele ifakwe ngaphakathi kuyo ngokwendalo.
Huawei Namhlanje yenye yezona zinto zibalulekileyo zabenzi kwimarike yefowuni ephathekayo kwaye ngokuqinisekileyo iya kuhlaziya izixhobo zayo eziphathwayo kwi-Android 7.0 Nougat. Nangona kunjalo, okwangoku asinalo uluhlu olusemthethweni lweetheminali, nangona sikwazile ukwazi ukuba abanye babo abanakho ukufumana uhlaziyo nge-OTA, njengesiqhelo kwaye ngaphezulu kwako konke ukhululekile, kufuneka uhlaziye ngesandla ngokukhuphela iROM.
Ngokufanelekileyo, iHuawei P9 kwiinguqu zayo ezahlukeneyo, iHuawei Mate S, iHuawei Mate 8 kunye neHuawei P8 ziya kuba zezinye zeetheminali ezingaphoswa kukuqeshwa kunye nohlaziyo, nangona ukuyiqinisekisa kuya kufuneka silinde umenzi waseTshayina ukuba abhengeze.
IHuawei kunye neNhlonipho khange ibe ngomnye wabavelisi abakhawulezayo bokuhlaziya izixhobo zabo, ke ukuba unesiphelo esivela kumenzi waseTshayina, eyona nto intle kukuba uyithathe lula kuba singakholelwa ukuba kwangoko okanye ubuncinci ngokufanayo Logama abasebenzisi be-LG okanye i-Motorola bazokwazi ukonwabela i-Android 7.0 Nougat entsha kwisixhobo sakho esivela kumenzi waseTshayina.
De Sony Singatsho ukuba yenye yezinto ezimbalwa eziza kuhlaziya uninzi lwezixhobo zayo ezinekhathalogu yazo. Umzekelo, ngaphandle kokuya kude, inkampani yaseJapan iqinisekisile ukuba zonke ii-smartphones kusapho lwe-Xperia Z kwaye phantse zonke ezo zikusapho lwe-Xperia X kunye no-C ziya kufumana i-Android Marshmallow. Kukucinga ukuba into efanayo iyenzeka nge-Android 7.0 Nougat entsha, nangona singazi ukuba ukufika kohlaziyo kunokuthatha ixesha elingakanani.
Kwiintsuku zakutshanje, ezinye iitheminali zenkampani yaseJapan ziqalisile ukufumana isabelo sabo seNougat. Apha ngezantsi sikubonisa uluhlu olupheleleyo lwezixhobo eziza kufumana inguqulelo entsha yenkqubo yokusebenza ye-Android;
Ukusukela i-Android 7.0 yangena ngokusemthethweni kwintengiso Enye yeenkampani ezisebenze kakhulu ukuvuselela ii-terminals zayo yi-BQ yaseSpain. Inguqulelo entsha ye-Android ayizukufumaneka kude kube yikota yokuqala yonyaka, kodwa sele silwazi uluhlu lwee-smartphones eziza kuhlaziywa ngokusesikweni.
Apha ngezantsi sikubonisa iiterminal ze-BQ eziza kuba ne-Android 7.0 Nougat ngexesha elifutshane kakhulu;
I-BQ Aquaris U Ukongeza
Siyakwazisa ukuba #Aquaris I-X5 Plus, U-range, A4.5, X5, M5 kunye neM5.5 ziya kuphuculwa #ndandi 7 INougat pic.twitter.com/YFGT9Dbc67
-BQ (@bqreaders) Novemba 17, 2016
Sele sizijongile izicwangciso zabanye abenzi ababalulekileyo emhlabeni, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo abanye abaninzi bakho kwimarike, ezinje Xiaomi, BQ o Inkqubo yamandla. Okwangoku, ngaphandle kweenkampani esizibonisileyo, akukho namnye uqinisekisile ngokusesikweni imephu yendlela yohlaziyo.
Kwiintsuku ezizayo okanye kwiiveki ngokuqinisekileyo siya kwazi ii-smartphones ezintsha eziza kuhlaziywa kwi-Android 7.0 Nougat kwaye siya kuba nakho ukwandisa olu luhlu. Nokuba yeyiphi na into onayo, gcina olu luhlu phakathi kweentandokazi zakho kuba apha siza kupapasha zonke iindaba ezenzeka malunga nokufika kwenguqulelo entsha ye-Android kwiitheminali ezahlukeneyo ezikhoyo kwintengiso.
Ngaba i-smartphone yakho ikuluhlu olusemthethweni lwezixhobo ezihlaziywa kwi-Android 7.0 Nougat?. Sixelele kwisithuba esibekelwe ukuphawula kule post okanye ngenye yeenethiwekhi zonxibelelwano esikhoyo kwaye usixelele nokuba ulindele ntoni kwinguqulelo entsha yenkqubo yokusebenza kweGoogle enokufikelela kwifowuni yakho
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Ezi zii-smartphones eziya kuhlaziywa kwi-Android 7.0 Nougat
Kuya kufuneka ihambelane ne-Samsung S5
Iya kuhlaziywa nge-bq aquaris m5
Ngaba ikhona indawo emarikeni nakwiintsuku zethu zemihla ngeBlackBerry?
Ibhetri enkulu kakhulu yayingunobangela weengxaki kwiGlass Note 7